Nin Taageero u ahaa Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney Oo Dilay Xaaskiisa Iyo Caruurtiisa | golobal News Network	Friday, May 24th, 2013	Home
Nin Taageero u ahaa Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney Oo Dilay Xaaskiisa Iyo Caruurtiisa
Nov 15, 2012 - jawaab	Mid ka mid ah taageeroyaasha Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney ayaa lagu soo waramayaa in uu dilay xaaskiisi oo lagu magcaabo Kathleen iyo labadiisa carruurta ee Christopher iyo Mathewiyo.
Abaha falkaasi ku kacay ayaa isaguna isdilay markii ay u Muuqatay in doorshooyinka dalkaasi uu ku horeeyo Maxadweyne Obama ,ninkaasi,iyadoona uu ka soo duceestay Kaniisada Maalintii Axada eheed kadibna markii uu yimid gurigiisa ku kacay Falkaasi foosha Xun.
Ninkaan ayaa lagaciisa lagu sheegay Albert Peterson ,Waxa uu ka soo jeeda qoomiyada cadaanka oo lagu magacaabo San Taaga oo katitrsan Cadaanka Asalaiga ah ee dalka Maraykanka.
Ilaa iyo hada si dhab ah looma garanyo sababta rasmiga h uu falkaasi ugu kacay ,balse waxaa la sheegay in uu ka mid ahaa dadka sida weyn u taageersanaa Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney oo looga guuleestay doorashooyinkaa dalka Mareykanka.
xafiska warqabadka golobalnws.com